Xilli duufaantii 2017, tii ugu firfircoonayd in ka badan qarni | Saadaasha Shabakadda
Xilligii duufaantii 2017, kii ugu firfircoonaa in ka badan qarni
Sawir - NOAA
Intii lagu gudajiray 2017 waxaa jiray duufaano dhowr ah oo waxyeelo lixaad leh geystay, ma ahan oo keliya maaddiga laakiin sidoo kale luminta dadka. Kaliya Irma, Qeybta 5aad, oo socotey Agoosto 30 ilaa Sebtember 15, waxay ku tagtey $ 118 khasaaro iyo dhimashada 127. Wuxuu ahaa kii ugu qaalisanaa tan iyo Katrina, 2003. Laakiin annagu kaliya ma xasuusan doonno Irma: waxaa jira magacyo kale oo aan sahlanaan doonin in la ilaawdo sidoo kale, sida Harvey o María.
Toddobaadkii hore dhammaadkiisii ​​ayaan haysannay Nate, Kaas oo ka soo noqday duufaantii kuleylaha ee halakeysay Costa Rica, Nicaragua iyo Honduras ilaa duufaan Qeybta 1 ah oo hanjabtay Mexico iyo qeyb ka mid ah xeebta Mareykanka. Iyadoo ifafaalahan, xilligan la joogo waxaa jira 9 duufaanno firfircoon xilliga, kan ugu firfircoon in ka badan qarni.
In kasta oo indha indheynta mar laga sameeyay dhulka ama doomaha, taas oo aad u adag in la ogaado haddii toban duufaanno samaysteen sannadka qaarkood, xaqiiqadu waxay tahay xilliga 2017 wuxuu si gaar ah ugu firfircoon yahay Atlantic, ilaa uguyaraan 1893. Laakiin maxaa yeelay?
Khubarada ayaa horay u sii saadaaliyay in xilligan uu ka firfircoonaan doono sidii caadiga ahayd. Celceliska heerkulka dusha sare ee Badweynta Atlaantik, oo ay weheliso ifafaale daciif ah oo ah El Niñowaxay u ogolaatay duufaano dhowr ah inay sameystaan ​​oo qaarkood aad u xoogan yihiin.
Duufaanta Maria waxyeelladeeda Puerto Rico.
Sawir - Carlos García / Reuters
Duufaannada waxay quutaan kuleylka badaha. Markay sare u kacdo heer kulka badda, ayaa la filayaa in duufaanno badan ay soo baxaan. Laakiin, marka lagu daro, haddii aan sii wadno u adeegsiga badaha qashin-qub, kaliya ma khatar gelin doonno nolosha xayawaanka badda, laakiin sidoo kale badbaadinteenna. Caaggu waa shey kululeeya kuleylka wuxuuna kordhin karaa heerkulka biyaha. Dhawaan helitaanka jasiirad cusub oo qashinka balaastigga ah ee Baasifigga, oo cabirkiisu yahay Mexico oo ka weyn Spain, waa inay naga caawisaa inaan qaadno tallaabooyin u adeegaya inaan bilowno ixtiraamka meeraha aan ku nool nahay.
Haddii aynaan yeelin, waa inaan la qabsanno dhacdooyinka cimilada ee sii xumaanaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Xilligii duufaantii 2017, kii ugu firfircoonaa in ka badan qarni
Las Tablas de Daimiel waxaa haysta abaar daran
Khabiirka ayaa sheegay inuu jiro xiriir u dhexeeya dhulgariir iyo qarax fulkaano